Bangladesh : Ny Adihevitra Momba Ny Sata Ao Amin’ny Facebook · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2011 11:30 GMT
Facebook dia manomboka ho filazam-baovao ara-tsosialy fanta-daza ao Bangladesh toy ny any amin'izao tontolo izao. Tsy voafetra ho fifandraisana eo amin'ny samy mpinamana ihany fa koa fitaovana iray anapariahana vaovao sy torohay. Ary ny tena lehibe dia efa miha ampiasaina amin'ny adihevitra momba ny fijery ara-politika koa izy izao.
Matetitetika dia betsaka ireo Bangladeshi mpampiasa Facebook no maneho hevitra ao, fahatezerana, zo, ny tiany sy tsy tiany ary nisy ireo sasany tena nentim-po tokoa. Indray mandeha dia nisy olona nampakatra ity sata ity tao amin'ny rindrin'ny Facebook izay niparitaka avy eo : “mety ho mahantra aho, nefa manana ny Satako aho”. Ankehitriny io teny filamatra io dia manana ny pejy Facebook-ny manokana
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Christy Sheffield. CC By-NC 2.0
Nefa indraindray ny satanao ao amin'ny Facebook dia mety hitondra loza. Ruhul izao dia vao haingana no tojo olana noho ny satany tao amin'ny Facebook. Ny fahafatesan'ireo olona lehibe Tareq Masud sy Ashfaque Munier teny an-dalàna tamin'ny lozam-pifamoivoizana ka nahatonga ireo mpampiasa Facebook hamoaka ny heviny sy ny fahatezerany tao. Ruhul koa dia namoaka ny heviny izay navesatra ihany ka nahatonga fanennjehana azy nataon'ny Fitsarana Avon'i Bangladesh.
Inona ilay satan'i Ruhul? BDNews24blog [bn] ] no mitanisa avy ao amin'ny Vohikala tambajotram-baovao BDNEWS24.com:
Ny Fitsarana Avo dia nanontany hoe maninona i Ruhul Amin Khondker, mpampianatra iray monina any ivelany, no tsy hiakatra fitsarana noho ny filazany fa tokony ho faty ny Praiministra.
Ilay bilaogy dia nampahafantatra hoe :
Ruhul mpampianatra ao amin'ny The Institute of Information Technology (Fampianarana ambony momba ny Torohay sy ny Teknolojia) ao amin'ny Anjerimanontolon'i Jahangirnagar dia eo an-dalam-pandinihana ny hifindrany any Aostralia. Ruhul dia nandefa lahatsoatra nilaza hoe” nahoana no tsy maty ny Praiministra”. Io dia taorian'ilay fahafatesana olona dimy ka isan'izany ilay mpamokatra sarimihetsika malaza maneran-tany Tareq Masud sy ilay Tale Jeneralin'ny fahitalavitra ATN News Ashfaq (Mishuk) Munier, tamin'ilay lozam-piarakodia teo akikin'ny Manikganj. Notaterin'ny gazety iray tao an-toerana izany tantara tao amin'ny mombamomba ilay mpampianatra tao amin'ny Facebook izany. Ren'ny fitsarana izany ka nandraisany fanapahan-kevitra Suo motu avy hatrany.
Nampakatra lahatsoratra roa teo amin'ny rindiny Ing. Ruhul. Ny Asabotsy tamin'ny 7.40 hariva dia nanoratra izy hoe :”Ny vokatry ny fanomezana taratasy fahazoana mamily fiara tsy nanao fanadinana an-tsoratra akory – dimy no maty ka anatin'izany i Tareque sy Mishuk Munier. Maty daholo ny olona afa-tsy ny Praiministra”. Ny sata iray hafa ny Alahady maraina tamin'ny 4:59 maraina mivaky hoe: “Taratasy fahazoana mamily fiara tsy nanaovana adina an-tsoratra? Azonao eritreretina ve izany ao anatinà fiarahamonina mandroso? Izao tontolo izao efa manomboka miha-hentitra amin'ny resaka fanomezana taratasy fahazoana mamily fiara, ny governemanta Hasina kosa manome taratasy fahazoana mamily fiara tsy misy fanadinana.”
Ny tena hatezerana be ao ambadik'ilay sata dia ny fanehoan-kevitra tamin'ilay vaovao [bn] fa hoe nangataka tamin'ny Ministeran'ny Fifamoivoizana an-dalambe ny Ministeran'ny Fifamoivoizana an-dRanomasina hoe misy 21.000 ny mpanao fangatahana (ny sasany milaza fa 24000 ) no tokony homena [bn] taratasy fahazoana mamily fiara na tsy mahavita feno ny fanadinana aza (satria maro amin'izy ireo no tsy mahay manoratra tsara).
Ilay lahatsoratra tao amin'ny BDNews24blog dia nanintona fanehoan-kevitra maro [bn]. Ny sasany nanohana an'i Ruhul ary ny sasany nanana hevitra hafa.
Rabbani nilaza hoe :
Izaho koa dia manohana ny satan'i Ruhul ary io hetsiky ny fitsarana ambony toy ny fanaparam-pahefana sy fampiharana lalàna io tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona ho an'ny sarambaben'olona. Ruhul tamin'io teniny io dia nanohitra ny tandrevaka ataon'ny mpitondra mikasika ny fahafatesan'olona 12000 maty isan-taona eny amin'ny arabe.
Mohammad Morshed Alam dia mihevitra fa io lalàna io dia fandonana mafy ny fahalalahana maneho hevitra. Hoy izy:
Moa va tsy manohitra ny demokrasia ny fanohintohinana ny fahalalahana hiteny ? Moa va tsy manamaivana ny fitokisana ny rafitry ny fitsarantsika izany? Ry mpitsara o -mba ajanony ny fanesorana ny fanantenana kelin'ny vahoaka. (Alakamisy faha 19 Aogositra).
Mohsin Rahman niteny hoe :
Ilay mpampianatra dia namoaka ny hatezerany manokana izay fitaratry ny eritreritry ny maro amin'ny mponina. Ny zavatra tsy vitan'ilay mpampianatra no nataon'ireo mpitsara. Novoitran'ny haino aman-jery sy navoakany io resaka io. (Alakamisy 19 Aogositra)
Hasan nanambara hoe :
Matahotra aho ny hanao fanamarihana amin'io , raha toa ka hiampangàna ahy lasa hoe maniratsira ny fitsarana ! 😛 (Alakamisy 19 Aogositra)
Ratan Adhikary nilaza fa tafahoatra loatra ireo fanamarihana ireo:
Lasa lavitra loatra io. Na inona na inona no ho lazain'ilay mpampianatra, Muhammad Ruhul Amin Khondoker, dia tsy mendrika ny ho tohanana mihitsy. Mino izahay fa Ing. Ruhul sy ireo mpanohana azy dia mba ho tonga saina amin'ny fitondrantenany. (Alakamisy 19 Aogositra)
Netpoka nilaza hoe :
Io karazana fanamarihana io dia tena tsy mihaja mihitsy. Fa inona anefa no mifanohitra amin'ny lalàna amin'izany, misy afaka milaza ve? (Alakamisy 19 Aogositra)
Ny fandrindràna tafahoatra loatra dia mitondra amin'ny sivana. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr publik15 (CC BY 2.0).
Anik Iqbal dia bilaogera iray . Nanokatra tanaty lisitra mailaky ny vondrona mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Jahangir Nagar izy(navoaka nahazoana alalàna):
Tena mba tiako ho hita ny governemanta raha tena afaka mamorona tanteraka ilay resaka sy manamarina ny tohan-keviny nefa raha manapa-kevitra ny hiroso amin'izany ry zareo, dia be no zavatra hisangaojy. Ny andraikitry ny governementa amin'ny maha-mpiaro ny zo manokan'ny mponina ao aminy dia hampametra-panontaniana. Ary koa, ny fihetsik'izy ireo dia azo sokajiana ho famoretana sy fanampenam-bava an-terisetra ny mponina. Na handresy izy ireo na tsia, dia mety hisy fiantraikany ratsy be amin'ny fomba fijery azy ireo izany, izay efa tandidonin-doza sahady.
Ruhul Amin dia nitafatafaa tamin'ny Bangla News (vaovaon'ny Bangla) [bn] tamin'ny alalan'ny mailaka ka tao no nanomezany ny votoatin'ireo fanambaràny:
Ry Rahalahy sy Anavaby malala :
Tsy ho averiko eto indray ny zavatra verintsika tamin'ny namoizantsika an'i Tareq Masud sy Mishuk Munier. Ny andro nahafatesan'izy ireo aho dia namaky ny fitantarana tanaty aterineton'iroe gazety avy ao Bangladesh. Nikaroka vaovao hafa momba azy io koa aho. Nanohina mafy ahy ireo fanehoana hevitra an-jatony napetraka momba ireo vaovao ireo . Tena feno loatra ny foko, ka navondroko ny sasany tamin'ireo fitanisana ireo ary nakariko tao amin'ny satako”.
Nanampy izy hoe :
Lazaiko tsy ampisalasalana fa tsy manana lonilony manokana amin'ny praiministra aho ary tsy mametraka fampitahorana ho azy any amin'ny alalan'ny satako mihitsy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Nizara tamin'ny namako ny hevitry ny olona rehetra mikasika iny lozam-pifamoivoizana iny fotsiny aho. Koa ny fametrahana io filazana io ho filazako manokana mifanohitra amin'ny marina. Matoky ny Praiministro aho, indrindra amin'ny maha-mpampianatra amin'ny Anjerimanontolo tsy miankina azy . Manaraka izany, raha nandona ny fon'ny sasany ilay sata dia tena mialatsiny indrindra aho ny amin'izany.
Ruhul namarana tamin'izao teny izao :
Ny fandikàna vilana ilay sata dia nitondra amin'ny vokatra tsy nampoizina. Antenaiko fa hifarana hatreo ny tantara ratsy.
Anik namintina hoe :
Am-pahalinana no anarahaka ny fivoaran-draharaha. Ity tranga ity, farafaharatsiny, no hanapa-kevitra ny amin'izay ho avy mamirapiratry ny filazam-baovao ara-elektronika sy hamaritra ny zon'ny olona hizara ny heviny amin'io fomba fifaneraserana maoderina sy matanjaka io.